ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဆွီဒင်ကြက်ခြေနီအသင်း၏ဥပဒေအကြံပေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
(ဂ)-ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းရှိ မူလွန်ကျောင်းများတွင် အလယ်တန်းပြဆရာ ဆရာမများ ခန့်ထားပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ခ)-သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ အုန်းဇုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇရပ်ကွင်းကျေးရွာ၏ ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက် ရွာမြေ အတွင်းကျရောက်နေသော သစ်တောမြေအား ပယ်ဖျက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်း
(က)-၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သော အမှတ်(၁) သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)နှင့် အမှတ် (၂) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်)တို့တွင် ကုမ္ပဏီများမှ ငွေကြေးများဆုံးရှုံးလျက်ရှိနေပါသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဆွီဒင်ကြက်ခြေနီအသင်း၏ဥပဒေအကြံပေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
18 February 2015 - 0
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဆွီဒင်ကြက်ခြေနီအသင်း၏ဥပဒေအကြံပေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညွန်ကြားရေးမှူး Mr.Dick Oskar Anders Clomen နှင့် Ms.Eva Ingela Holmertz တို့ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေ (၄း၃၀)တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အမှတ်(၁) ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ- ဆွီဒင် ကြက်ခြေနီအသင်းများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ခိုင်မာ ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်၊ ဥပဒေရေး ရာနှင့် အထူးကိစွရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်စိုးနှင့် လွှတ်တော် ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတတ်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ရက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် Edmond Efendija (Senior Legislative Strengthening Adviser) ဦးဆောင်သော National DemocraticInstitute (NDI) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် သည် Edmond Efendija (Senior Legis
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် သည် မြန
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော သဘာဝဘေးဒဏ်ကျရောက်နေသည့် ဒေသများရှိရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော သဘာဝဘေးဒဏ် ကျရောက်နေသည့် ဒေသများရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ အတွက် အလှူငွေပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IMF) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် သည် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ထိုင်းနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Suchart Tonjaroen အား တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ဟန်းဆိုင်ဒယ်ဖောင်ဒေးရှင်း မြူးနစ်ရုံးမှ တောင်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသဌာနအကြီးအကဲ Mr. Stefan Burkhardt အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် သည် ဟန်းဆိုင်ဒယ်ဖောင်ဒေးရှင်း မြူးနစ်ရုံးမှ တောင်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသဌာနအကြီးအကဲ Mr.